‘अल्फा बिटा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर’ जुलाई २४ मा, २० वटा विश्वविद्यालयहरु नेपाल आउँदै
कर्पोरेट नेपाल , २ श्रावण २०७६, बिहीबार, ११:४२ am
काठमाडौं । यस बर्षको अल्फा बिटा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर जुलाई २४ (साउन ८ गते)मा आयोजना हुने भएको छ । अष्ट्रेलियाका २० वटा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरु सहभागी यस बर्षको मेला अल्फा बिटा इन्ष्टिच्युटको कार्यालय बुद्धनगरमा बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
एकै छानामुनी अष्ट्रेलियाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट र परामर्श गर्न सकिने भएकाले यस मेलाको विशेष महत्व रहेको अल्फा बिटा इन्ष्टिच्युटका कार्यकारी अध्यक्ष द्धिराज शर्माको भनाई छ । मेलामा प्रमुख अथितिको रुपमा नेपालका लागि अष्ट्रेलियाका राजदूत पनि आएर कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
मेलामा सहभागी विद्यार्थीहरुलाई अल्फाविटाले थुप्रै सुविधा र उपहार दिने योजनासमेत बनाएको छ । मेलाको प्लाटिनम स्पोन्सरको रुपमा रहेको सिल्क एयरले मेलामा आएकामध्ये एक जना विद्यार्थीलाई मेल्बोर्नसम्मको हवाई टिकट निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ भने अरु दुई जनालाई विशेष छुटमा टिकट उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै, डायमण्ड स्पोन्सरको रुपमा रहेको एनएमबि बैंकले मेलामा आफ्नो स्टल नै राखेर शैक्षिक कर्जाको बारेमा जानकारी दिने छ । अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई सहज र छिटो प्रक्रियाबाट शैक्षिक कर्जा के कसरी दिने ? भन्ने बारेमा एनएमबि बैंकका प्रतिनिधिहरुले जानकारी दिने शर्माको भनाई छ ।
अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने इच्छा भएका विद्यार्थीहरुको लागि पहिलो शर्त भनेको आईईएलटीएस, पीटीई जस्ता भाषा परीक्षा हो । शर्मा भन्छन्, ‘अष्ट्रेलिया जाने मात्रै भनेर भएन्, आईईएलटीएस, पीटीई कसरी पास गर्ने ? के के गर्नुपर्छ त्यसका लागि ? यस्ता कुराहरु बुझ्नु जरुरी छ । त्यो सबै कुरा बुझ्ने उपयुक्त फोरम पनि हो अल्फा बिटा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर ।’
अल्फाबिटा फेयरमा आईईएलटीएस, पीटीई दुवैका स्टल बस्दैछन् । दुवैबाट प्रतिनिधिहरु आएर विद्यार्थीलाई परामर्श दिनेछन् । पियर्शनको इण्डियाबाट प्रतिनिधि आउने कार्यक्रम छ भने आइडीपी तथा पियर्सन दुईले गिफ्ट भौचरहरु दिँदैछन् । मेलामा गोलाप्रथाबाट यी भौचरहरु विद्यार्थीलाई उपहारको रुपमा प्रदान गरिनेछ । यस्तो भौचर प्राप्त गर्नेले १९ हजार रुपियाँ नतिरीकन आईईएलटीएस तथा पीटीई परीक्षा दिन पाउनेछन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘त्यो हुँदा सबै कुराहरु एउटै छातामुनी विद्यार्थीले खोजेको, बुझ्न चाहेको कुरा प्राप्त हुनेछ । आईईएलटीएस सुरु नगरेका विद्यार्थीका लागि मेलामै क्लास के कसरी लिने ? कसरी परीक्षा दिने भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भइहाल्छ । परीक्षा दिएर डकुमेन्ट तयार भइसकेका विद्यार्थीका लागि पनि कुन युनिभर्सिटी पढ्ने ? के विषय पढ्ने ? भन्ने कुरामा प्रक्रिया त्यही सुरु गर्न सक्नेछन् । किनभने युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरु नै त्यही हुन्छन् । विद्यार्थीले डकुमेन्ट छोडेर, त्यो डकुमेन्ट इमेल गरेर पठाएर त्यसपछि उताबाट प्रतिक्रिया आउनुभन्दा त युनिभर्सिटीकै प्रतिनिधिहरु आएको बेला डकुमेन्ट देखाएर प्रक्रिया सुरु गर्न सहज भयो । डकुमेन्ट ठिक छ भने उनीहरुले तत्कालै पठाइदिनु भनिहाल्ने भन्ने भएकाले विद्यार्थीलाई पनि अन्योलता र झन्झट हुँदैन् ।’
मेलामा बैंकदेखि युनिभर्सिटीसँगको कुराबाहेक हवाई भाडादर बुझन सकिन्छ । मेलामा आउने विद्यार्थीलाई आकर्षणको रुपमा गिफ्ट भौचरहरु पनि प्राप्ति हुनेछ । त्यसबाहेक अष्ट्रेलिया विद्यार्थी गईसकेपछि काम के गर्ने ? भन्ने अन्योलता हटाउन अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको कफि मेकिङ सम्वन्धी क्लासका लागि हिमालयन जाभालाई पनि मेलामा सहभागी गराइने छ ।
कफि मेकिङ सजिलो पनि काम भएकाले यसमा नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढि देखिएको भन्दै शर्माले तीन हजार रुपियाँ लाग्ने १५ दिनको उक्त कोर्षका लागि हिमालयन जाभाले एक जना भाग्यशाली विजेता निःशुल्क तालिम पनि दिने जानकारी दिए । अल्फाबिटाको फेयरमा अष्ट्रेलियाका नाम चलेका म्याक्वारी, स्वाइनबर्न, ओलोङगोङ, सीक्यू, भिक्टोरियालगायतका विश्वविद्यालयहरु सहभागी हुँदैछन् ।